Dad Ku Dhintay Rabshado Ka Dhacay Magaalo Ku Taalla Mareykanka | Somaliland Today
← Orodyahanka Mo Farah Oo Lagaga Guuleystay Orodka 5,000m Ahaa +SAWIRRO
24 Qof Oo Ku Dhintay Rabshadihii Ka Dhacay Dalka Kenya. →
Dad Ku Dhintay Rabshado Ka Dhacay Magaalo Ku Taalla Mareykanka
(SLT-Virginia)-Hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay ku dhawaad 20 kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib marki baabuur la jiirsiiyey kooxo iska soo horjeeday oo ku banaanbaxayey magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia.
Banaanbaxa ayaa waxaa soo qaban qaabiyay kooxaha cadaanka xag-jirka ah ee ay ku weyntahay caddaannimada, halka kooxda kalana ay ahayd dadka kasoo horjeeda fikirkaasi.
Muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya baabuur si xoli ah ku socday oo jiiraya dad farabadan oo ku socday waddo ay dhinacyada kaga tixanyihiin guryo.
Goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in qofka watay baabuurka uu dadka sameynayey banaanbaxa dardarsiiyey wax ka badan ka badan laba jeer.
Booliska Virginia ayaa sheegay inay xireen darawalki waday baabuurka isla markaana ay ula dhaqmayaan arrintani baaritaan danbi dil ah.
Duqa magaalada Charlottesville Mike Singer ayaa hadal uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu aad uga naxay dhimashada ka dhacday magaalada. Wuxuuna dadka ugu baaqay in ay guryahooda aadan.
Goor sii horeysayna rabshado ayaa ka qarxay magaalada Charlottesville kadib marki ay isku dhaceen kooxo dibaxayey oo iska soo horjeeda.
Banaanbaxan oo marki danbe la joojiyey ayaa waxaa soo qabanqaabiyey koox u dhaq-dhaqaaqda qaar ka mid ah bulshada cadaanka Mareykanka ee aaminsan in ay ka sarreeyaan qowmiyadaha kale ee daga Mareykanka.
Dadkan ayaa ka careysnaa tallaabo uu maamulka magaalada ku dajinayo taalada General Robert E. Lee oo ahaa jeneraalki hogaaminayey garab ka mid ah dhinacyadi ku dagaalamay dagaalki sokeeye ee Mareykanka ka dhacay inti u dhaxeysay 1861-65.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ka hadlay rabshadaha ka dhacay gobolka Virginia ayaa cambaareeyey, isaga oo ku tilmaamay wixi ka dhacay bandhig naceyb aad u liita, casabiyad iyo qalalaaso dhinacyo badan leh.
Gudoomiyaha gobolka Virginia Terry McAuliffe ayaa gabaldhici shalay xiliga Mareykanka ku dhawaaqay in magaalada Charlottesville lagu soo rogay bandow.
Dhinaca kalana, diyaarad helicobter ah oo ay leeyihiin ciidanka booliska Virginia ayaa ku soo dhacday duleedka magaalada ay rabshaduhu ka dhaceen. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay laba ruux oo uu ku jiray duuliyihii diyaarada. Boolisku maysan faah-faahin waxa sababay shilka diyaaradda.